ငါကွဲပြားခြားနားသောယောက်ျားလေးခြောက်ယောက်နှင့်အတူတူညီ TINDER ရက်စွဲများခြောက်လသွားလေ၏ - ဤငါလေ့လာသင်ယူသောအရာ - သတင်း
ငါကွဲပြားခြားနားသောယောက်ျားလေးခြောက်ယောက်နှင့်အတူတူညီ Tinder ရက်စွဲများခြောက်လသွားလေ၏ - ဤငါလေ့လာသင်ယူသောအရာ
မတ်လတုန်းကပျင်းစရာကောင်းတဲ့နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေဟာချေးငှားရသောအရာများကိုဆွေးနွေးနေကြသည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Ellie သည်သက်တမ်းတိုးစာချွန်လွှာအတွက်သက်သတ်လွတ်စားတော့မည်ဟုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း Emily ကသူမအလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Tilly ကကျွန်တော့်ကိုလှည့်ပြီး 'မင်းကနင့်ယောက်ျားလေးမဟုတ်လား' လို့ပြောတယ်။ ၎င်းနောက်သိသာထင်ရှားပြီးအချို့သည်ရိုင်းစိုင်းသောရယ်မောခြင်းကိုမဖော်ပြပါ။ ငါ Tilly ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါ Lent မှာအပတ်တိုင်းငါ Tinder ရက်စွဲတစ်ခုမှာသွားမယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်။
ငါဒီသိပ္ပံပညာ၊ ဂန္ထဝင်ခြောက်နှစ်သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုလုပ်ချင်တယ်။ ငါကလူမှလွဲ။ variable တွေကိုအားလုံးအတူတူထားရှိမည်။ ငါနှစ်သက်သောသူကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုရက်စွဲကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောသူနှင့်အခြားမည်သည့်အရာပေါ်တွင်မျှအခြေမခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအခြေခံသိပ္ပံပညာရှင်တွေပါ။
ဒီတော့ဒီမှာငါ့အသေးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်ပတ်, ခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောယောက်ျားတွေနှင့်အတူတူညီရက်စွဲများ။ တူညီသောမတ်မတ် (အစိမ်းရောင်အပေါ်ဆုံး၊ အနက်ရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ဒေါက်ဖိနပ်)၊ တူညီသောဘား (Pepper Rocks)၊ ပထမလိုင်း ('ဟေ့၊ ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့နေ့ရက်ဘယ်လိုရှိပြီလဲ၊ အခုဒီမှာငါဒီမှာရောက်နေပြီလို့ငါထင်တယ်။ '), တူညီသောသောက်သုံးမှု (G&T)၊ တစ်ပတ်တည်းသောနေ့ (အင်္ဂါနေ့) နှင့်အတူတူပင်ငါ (မျှော်လင့်သည်) ။
တော်တော်ကောင်းသွားပြီ။ သူကချစ်စရာကောင်းပြီးရယ်စရာကောင်းတယ်။ ထို့နောက်သူ၏ဖုန်းမြည် - သူကလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူကနောက်တဖန်မြည်, သူကတိတ်ဆိတ်ပေါ်မှာထားတော်မူ၏။ ဒါပေမဲ့တတိယအကြိမ်ပြောတာကမင်းကမင်းကိုဖြေသင့်တယ်လို့ထင်တယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာပဲလို့ပြောတယ်။ သူကသိုးမွှေးပုံပေါက်နေသည်။ 'ဒါအဆင်ပြေတယ်' လို့သူပြောတယ်။ ငါအေးဆေးနေခဲ့တယ်၊ ကောင်းတယ်၊ ငါတို့အားလုံးမှာအခွင့်အရေးဟောင်းရှိလား။ 'မင်းကတစ်ကိုယ်ရေဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ' အဖြေ: သုံးရက်။ ငါးနှစ်ကြားဆက်ဆံရေးပြီးနောက်။ ငါဆင်ခြေပေးပြီးအိမ်သို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသေချာသည် (သေချာသည့်ဟွန်း) ဟုတစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်စာပို့ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေတောင်ခေါ်လာပြီးသူ့ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တောင်းပန်ပါတယ်!
ဒါကဂန္ထဝင်ပါ။ သင်ကရပ်ဂ်ဘီကောင်လေးနှင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်မပါဝင်လျှင်သင်ပင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား။ သူကသူပြန်လှည့်လာသောအခါသူသည်ပုံမှန်အဝတ်အစားများဝတ်နေသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်လည်ချောင်းထဲ၌သံချည်မထိုးဘဲသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်မှလှည်းဘောင်းဘီတိုများဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောရပ်ဂ်ဘီကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရတော့ပါ။
သူကအရမ်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့တယ်။ စကားပြောဆိုမှုသော်လည်း? သူကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာလုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ SO ပြက်လုံးတစ်ခုကစားခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dodders ကသူ့ခြေဖ ၀ ါးကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်သည်။ ငါသူဖြုတ်ချခဲ့သည့် BNOC အမည်များကိုသိသော်လည်းငါသည်ဤလောကနှင့်မစပ်ဆိုင်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါဒီတစ်ခုအကြောင်းကိုတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သူကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ စကားလည်းကောင်းတယ်၊ လူအနည်းငယ်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသိတယ်။ ကျနော်တို့နေ့စွဲကောင်းခဲ့ပြီးတော့သူကကျွန်မကိုအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းငါနောက်တစ်နေ့တွင်မိန်းကလေးများအားသတင်းပေးပို့သည်။
'အိုးချစ်လား' ငါ့အိမ်ရှင်က 'မင်းဟာ A ရဲ့ပိုင်ခွင့်ဟုတ်လားသိလား' မဟုတ်ဘူး။ ငါမလုပ်ဘူး။ A နဲ့ငါတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တကယ်မသိခဲ့ပေမဲ့နာမည်နဲ့မျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲမင်းရဲ့ဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့အသစ်တွေ့တဲ့သူရဲ့နာကျင်မှုကိုငါအပြည့်အဝသိတယ်။ ကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးမဖြစ်နိုင်ဘူး ချစ်သူကောင်လေး3။
ရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ4memes တယ်
ဒီကောင်လေးကရိုးရိုးသားသားချစ်ပြီးညနေခင်းလေးမှာရှိတာကိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးေဆာင်မင်နှင့် we ည်းကောင်း evening ေတာ်ေတာ်ေကာင်းေတွ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ သူဟာကောင်မလေးကြီးဖြစ်လို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုသူတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တကယ်ကချွတ်နှိပ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပထမဆုံးနေ့စွဲ၊ သူကကြည့်ကောင်းတယ်၊ ကြင်နာတယ်၊ ရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါတို့ကလစ်လိုက်ရုံပဲ။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမိန်းကလေးတွေကိုသူ့အကြောင်းပြောနေတာ။ 'သူ့ကိုစာပို့ဖို့စောလွန်းလား။ ငါသူငါ့ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်အမှန်တကယ်ထင်ဒါကြောင့်ငါလိုက်တယ်ရဲ့မထင်ကြဘူး။ ငါဘယ်လိုကစားသင့်လဲငါသူ့ကိုနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ချင်တာပါ ' ဟုတ်ပါတယ်၊ သဘာဝကသူကျွန်တော့်ကိုမုန်းတီးခဲ့တယ်။ ပွဲစား။
ဒါကြောင့်ရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်မရဲ့စိန်ခေါ်မှုပြီးဆုံးခါနီးပြီ။ ငါအရမ်းမောပန်းပြီးဒီအချက်ကြောင့်တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ် (ငါရက်စွဲတွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးဆပ်ဖို့အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ ငါတို့အားလုံးဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ ငါတို့အားလုံးပေးဆပ်ရတဲ့ငွေကိုပေးသင့်တယ်) ဒါကြောင့်ငါမျှော်လင့်ချက်အများကြီးမစောင့်ခဲ့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ဒီဟာကငါအကောင်းဆုံးနေ့ရက်ပဲ။ ဒီကောင်လေးကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ် ကျွန်မတို့မှာအဆင်မပြေတဲ့တိတ်ဆိတ်မှုတွေတောင်မှသူကျွန်တော့်မိသားစု၊ ကျွန်တော့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်၊ Plus အားသူအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ 'ဒါဆိုမင်းဒီနှစ်ဘွဲ့ရတာမှန်ရဲ့လား။ နောက်နှစ်အတွက်အစီအစဉ်တွေရှိလား။ ' ... '' ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်သြစတြေးလျကိုတစ်နှစ်သွားမယ်၊ အမြဲတမ်းတောင်မှမသေချာဘူး၊ ဟုတ်ပြီ သူ့ကိုငါအကြိမ်အနည်းငယ်တွေ့ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့နှစ် ဦး လုံးကအဲဒါကိုအလုပ်မလုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရပ်နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် သြစတြေးလျဟာအကွာအဝေးအဝေးဆုံးမှာပါ။
ထို့ကြောင့်တူညီသော tinder ရက် (၆) ခုလုပ်ခြင်းသည် Mr Right ကိုရှာရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒါကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါဘယ်သူမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်ကြီးလှ၏။ သို့သော်ဘ ၀ သည်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အချို့သောငွေများကိုစုဆောင်းပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်တည်နေရာနှင့်အနာဂတ်အတွက်အဝတ်အစားများကိုပြန်လည်စဉ်းစားပြီး Tinder နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါ။
ကြောင်း swaggy ဘီလ်ကလင်တန်စံချိန်လုပ်ဖို့ဘယ်လို Insta အပေါ်လူတိုင်းလုပ်နေရဲ့စိန်ခေါ်မှု
BU အဘယ်ကြောင့်စုပ်ယူသည်ကို BC ကျောင်းသားများအားကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခဲ့သည်
သင်၏နာမည်ကြီးသောအမှတ်အသားကိုအခြေခံပြီးဘယ်လူကြိုက်များတဲ့ Durham ကော်ဖီဆိုင်ကိုတွေ့ပါသလဲ။
Netflix ရဲ့ငါဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ် Am အတွက် Wyatt Oleff ခေါ် Stanley ဘာဘာတွေ့ဆုံရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် 'Naughty By Nature' အားနယူးကာဆယ်လ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်စက်ရုံအခြေပြုအညစ်အကြေးများကိုထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့သည်
Love Island ၏နာနှင့်အီဗာတို့သည်ခြောက်လအကြာတွင်တရားဝင်သွားခဲ့သည်
သင်၏ Cuse ရှပ်အင်္ကျီကိုနောက်တံခါးပေါက်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
တရား ၀ င်အရက်သောက်ခြင်းဟာဘီယာတစ်ခုထက်ပိုဆိုးသည်